မိဘ နှစ်ပါးအားပစ်သတ်၍ အသက် ၁၆ နှစ် ကလေးမအား နအဖ စစ်သားမုဒိန်းကျင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မိဘ နှစ်ပါးအားပစ်သတ်၍ အသက် ၁၆ နှစ် ကလေးမအား နအဖ စစ်သားမုဒိန်းကျင့်
မိဘ နှစ်ပါးအားပစ်သတ်၍ အသက် ၁၆ နှစ် ကလေးမအား နအဖ စစ်သားမုဒိန်းကျင့်
Posted by နွယ်ပင် on Nov 26, 2010 in Myanma News, News | 21 comments
“စနေနေ့ ကလေ ဗမာစစ်သားက ကောင်မလေးကို ဆွဲခေါ်သွားတော့ မိဘတွေဝင်တားလို့ အဲဒီစစ်သားက မိဘ နှစ်ယောက်စလုံးကို သေနတ်နဲ့ ပစ်တော့ ပွဲချင်းပြီးသေတာ။ ကောင်မလေးကို ဆွဲဖမ်းပြီး တခြားနေရာသွား မုဒိန်းကျင့်တယ်။ အဲ့ကောင် အိပ်ပျော် နေတုန်း ကောင်မလေးက ထွက်ပြေးပြီး ရွာလူကြီးတွေဆီ ငိုကြီးချက်မနဲ့ သွား တိုင်တယ်” – ဟု လင်းခေး ဒေသခံ ခေတ်ပညာတတ် လူငယ်တဦးက ပြောသည်။
“အခု အဲ့ဒီ့ကလေးမ ရွာမှာရှိတဲ့ သူ့ အဒေါ်အိမ်မှာဘဲရှိနေတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရမ်းထိခိုက်နေတယ်။ တပ်ဘက်သတင်း အရ အဲဒီ ဗမာစစ်သားက စိတ်မနှံ့ဘူးတဲ့။ နောက်ပြီးတော့ သူ့ကို သတ်ပစ်လိုက်ပြီ လို့လဲ ဆိုပြီး နအဖတပ်ကအရပ်ထဲ သတင်း လွှင့်ထားတယ်” – အမည်မဖေါ်လိုသည့် လင်းခေးဈေးသည်တဦးက ပြောပါသည်။
ငွန်ငယ်မိုး ” မှကူးယူဖော်ပြထားပါသည် ။ သတင်း…ဒီမိုဝေယံ..။
မိုက်ရိုင်းလိုက်တာကွာ။ လူမှဟုတ်ရဲ့ လား။ မိဘကိုသေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ပြီးမှ မုဒိမ်းကျင့်တတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်မနှံ့ တာမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ကြားရတဲ့ သတင်းတွေကတော့ မကြားဝံ့စရာတွေ ကြည့်ပါလားနော် တော်တော် မိုက်ရိုင်းကြတဲ့ လူတွေပါလား။ အဝီစီ ရောက်မှာ မကြောက်ဘူးထင်တယ်နော်။ အဲဒီစစ်သားက စိတ်မနှံ့ သတ်ပစ်လိုက်ပြီ ဆိုတာကတော့ သတင်းကို မပေါက်ကြားစေချင်လို့ လုပ်တယ်ဆိုတာ အသိအသာကြီးနော် ။
စစ်တပ်ကဟာတွေ အကုန်လုံးကုန်းကုန်းလုပ်ထားမှကောင်းမယ် ။
ဟွန်း…. အရူးမှ တဏှာရူးအစစ် ၊ အရူးပါး ။ ဒီလောက်ငတ်ပြတ်နေရင်လဲ အခပေးပျော်ပါးလို့ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ် ။ ပိုက်ဆံမရှိလည်း အကြွေးညှိကြည့်ပေါ့ … ။ အလကားကောင်တွေ အားအားရှိ အမျိုးကောင်းသမီးတွေကိုပဲ လိုက်ပြစ်မှားနေတယ် ။
မိန်းခလေး တော်တော် ၀ဋ်ကြီးတာဘဲ.. သနားပါတယ်။ မိန်းကလေး အခု တော်တော် စိတ်ညစ်နေမှာဘဲ. အရူးတပိုင်းများ ဖြစ်နေမလား.. အသက် ၁၆နှစ်ဆိုတော့.. အတွေးအခေါ်နဲ့ ဘ၀ အတွေ့အကြုံ နုသေးတယ်။ အရွယ်ကောင်းလေး မိဘလည်း မရှိတော့ဘူး.. အားကိုးရတဲ့ ဦးလေး အဒေါ်ကလည်း ကြင်နာ သနားစိတ်နဲ့ မညိုမညင် အမြဲ စောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေ။
စစ်သားတွေများ အမမှန်ရင် ခွေးမတောင်မချန်တဲ့ကောင်တွေ … သူတို့ တပ်ချုပ်ကြီး အချိုးအတိုင်းပဲ။
သူတို့သမီးတွေကို အဲလိုလုပ်ပြပြီး …..သူတို့ကိုပြချင်တယ်ဗျာ….
ဒါမှမဟုတ်ရင် အ၀ှာလေးကို ဖြတ်လိုက်ကြ…
ဒီ သတင်း အမှန်သာဆိုရင် မိုက်ရိုင်းယုတ်မာလွန်းတယ်….ကိုယ့်ညီမလေး ကိုယ့်မိသားစုသာဆိုရင်ဆိုပြီး ကိုယ်ချင်းစာမိလေ အဲဒီအကောင်တွေကို သတ်ပစ်ချင်လေပဲ….ေXွးမသားတွေ !!!!!!!!!!!!!
နှမချင်းကိုယ်ချင်းမစာဘူးနော် တော်တော်ယုတ်မာတယ် ၀တ်ပြန်လည်မှာပါ
ကျွှန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာ အစ်ုးရစစ်သားတွေ အနိုင်ကျင့်တဲ့ကိတ်စတွေဖြစ်နေတာ ခေတ်အဆက်ဆက်ပါဘဲ ပေါတာနဲ့မပေါ်တာဘဲ ကွာမယ် တိုင်းရင်းသားသတင်းငှာနတွေ ပေါ်လာတာ ကောင်းပါတယ် တောင်ပေါ်သားတစ်ယောက်က စစ်သားတွေက်ု မုန်းတာထက် ပ်ုတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ကျွှန်တောလည်းခံစားရပါတယ် ချောဆွဲ ပေါ်တာဆွဲ သေနတ်နဲ့အချိန်ခံရတာ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ဆုံးရှုံးရတာ မဆန်းပေမယ့် မတရားခံရတာတော့ လက်နက်နဲ့ပြန်တိုက်တာအမှန်ဆုံးပါ
ဖြစ်နှိင်ပါတယ် စိတ်မနှံတဲ့သူတွေလက်ထဲအာဏာနဲ့လက်နက်ရောက်သွားရင် သူတို့ယုတ်မာချင်သလိုယုတ်မာတော့တာဘဲ…
ဒါ ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်…ဒီပို့စ် အရပြောတာပါ
ဟိတ် သိပ်မပြောကြနဲ့ဦး တော်ကြာ ဒီအကျင့်မကောင်းတဲ့စစ်သားကို အားလုံးက ၀ိုင်းပြောတာကို တို့ရွာသားတွေ ၀ိုင်းဆော်တယ်လို့ ဒီဇင်ဘာလ သုံးသပ်ချက်ကြရင်ထပ်ပါနေဦးမယ် ။
အရူးကတမူးသာတဲ့။အဲဒီစကားပုံကိုပြောင်းရမလိုဖြစ်နေပြီ၊ -အရူးကလူသတ်လက်မှတ်ရ -လို့၊ ရူးနေရင်လည်းအရူးထောင်ထဲမှာပဲထားပေါ့၊ ကောင်းလို့ပြန်လွှတ်လိုက်ရင်ရူးတယ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူး။
မိုက်ရိုင်းတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်တောင် များပြားလာနေပြီလဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူတွေ စရိုက်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပျက်ပြားလာကြတာ နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်လာသလိုပါပဲ။ ဒီလိုကောင်ကို သတ်ပစ်တာ ပိုကောင်းတယ်။ သမီးနာမည်မထည့်ပဲနဲ့ မိဘနာမည်ကျတော့ ထည့်တာ ကောင်းပါ့မလား….
ဒီလိုကိစ္စတွေက မဖွံဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်နေကျပါပဲ။ တိုင်းပြည်ချစ်သူကလည်းတပ်ထဲဝင်တယ်။ ကလေကချေကလည်းတပ်ထဲဝင်တယ်။ အချိန်တန်တော့လက်ထဲကို သေနတ်ကိုယ်စီရောက်လာတော့ သံမဏိစည်းကမ်းနဲ့ စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ် နဂိုစိတ်ဝင်းမာန်တက်လာတယ်။
အားနည်းသူကို အနိုင်ကျင့်တက်လာတယ်။ တစ်ယောက်ကမှားလို့ ဘေးကဝိုင်းထိန်းရင် ပြဿနာမရှိပေမယ့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်တာများနေတော့ ဖြစ်နေကျကိစ္စတစ်ခုလို သဘောထားသွားကြတယ်။ ဒါမှ တကယ့်ပြဿနာ။
တရားခံကို အတိအကျသိရရင်တော့ မီဒီယာကိုပဲအားကိုးပြီး ရှင်းရမှာပဲ။
ပိုက်ဆံလာပေးတယ်ဆိုတဲ့ တင်ရွှေဆိုတဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဆိုတဲ့ သကောင့်သား သတင်းထိန်ချန် လူမိုက်အားပေးကိုကော ဘာမှ Action မယူဘူးပေါ့။
ဘာမှ အပြစ်ဆိုတာ ပေးရမယ်မသိတော့ ဒီလိုဖြစ်နေကြတာ။
စနစ်တကျ ပြစ်ဒါဏ်ပေးလိုက်ရင် ကျန်တဲ့သူတွေ
ဒီလို အောင်တန်းစားအကျင့်တွေ ဆက်ပြီး မလုပ်ရဲတော့မှာစိုးလို့လား။